MBA OLE HA DỊ 57
MMADỤ OLE BI NA HA 980,780,095
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 4,034,693
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 4,339,285
Ụmụ Na-enweghị Nne na Nna Amalite Ịbịa Ọmụmụ Ihe
Otu nwanna nwaanyị bi na Surinama aha ya bụ Angela gara n’ogige ụmụ na-enweghị nne na nna ka o zie ha ozi ọma. Onye na-elekọta ogige ahụ bụ nwanna nwaanyị na-anaghị ejekwa ozi ọma. N’ihi ya, o kwere ka Angela bata zie ụmụaka ahụ ozi ọma. Ha dị iri asatọ na ise. Angela ziri ha ozi ọma ma gosi ha vidio anyị ụfọdụ dị na jw.org. Ya na ọtụtụ n’ime ha mechara mụwa Baịbụl. Ụmụnna nwaanyị abụọ bụ́ ndị ọsụ ụzọ malitere iso Angela aga ebe ahụ amụrụ ha ihe. Onye nke ọ bụla n’ime ha nwere ụmụaka ọ na-amụrụ Baịbụl. Nwanna nwaanyị ahụ na-anaghị ejekwa ozi ọma kwuru na ya akụzierela ụmụaka ahụ ụfọdụ abụ anyị, nakwa na ọ na-agụrụ ha akụkọ Baịbụl n’abalị. O kwukwara na ya chọrọ ịna-aga ọmụmụ ihe ma ya enweghị ike ịhapụ ụmụaka ndị ahụ naanị ha n’ogige ahụ. N’ihi ya, a haziri otú ha ga-esi na-abịa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ebe ọ bụ na ogige ahụ dị nso n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụmụnna anyị na-aga akpọta ha n’ụbọchị ọmụmụ ihe. Ugbu a, nwanna nwaanyị ahụ na ụmụaka niile ahụ na-abịachi ọmụmụ ihe anya.
Gabriel Nyeere Nna Mama Ya Aka
Paragụwaị: Ebe Gabriel na nna mama ya na-ekwurịta okwu
Mgbe otu nwata nwoke dị afọ isii aha ya bụ Gabriel na-alọta mgbakọ ukwu e mere na Paragụwaị, ọ nọ na-eche otú ọ ga-esi zie ndị mmadụ ozi ọma Alaeze Chineke n’ihi na ọ dị ezigbo mkpa. O chetara otu onye dị ya ezigbo mkpa ọ chọrọ ka ya na ya biri na Paradaịs. Onye ahụ bụ nna mama ya. Ma, nna mama ya ahụ achọghị ịbụ Onyeàmà Jehova. Ọ na-emegidekwa nwunye ya na ụmụ ya bụ́ Ndịàmà Jehova.
Mgbe ha lọtara, Gabriel gwara papa ya na mama ya ka ha were fon ga-eme ka mmadụ na-ahụ onye ọ na-agwa okwu kpọọ nna mama ya nọ n’Ajentina. Mgbe Gabriel na nna mama ya na-ekwurịta okwu na fon, ọ gwara ya ihe mere ịmụ Baịbụl ji dị ezigbo mkpa. Ọ jụrụ ya, sị: “Papa, ị̀ chọrọ ka mụ na gị mụwa Baịbụl?” Ya ekweta ka ha mụwa Baịbụl. Gabriel gwara ya ka ha mụwa akwụkwọ Gee Chineke Ntị Ka I Wee Dị Ndụ Ebighị Ebi. Ha mụrụ akwụkwọ a ọnwa ole na ole. Ebe ọ bụ na ha abụọ amachaghị agụ ihe, ha na-agụ ya ugboro ugboro n’onwe ha tupu ha amụọ ihe. Gabriel na-amụkwa akwụkwọ ya nke ọma tupu ha amụọ ihe. Ha chọọ ịmụ ihe, ọ na-eyi ezigbo uwe ma kpọọ taị.
Nna mama Gabriel na nne mama ya mechara bịa na nke mama na papa Gabriel nọọ izu ole na ole. N’oge ahụ ha nọ n’ụlọ ha, nna mama ya so ha na-aga ọmụmụ ihe. Mgbe ọ laghachiri Ajentina, ya na otu nwanna mụwara Baịbụl. Ọ ghọọdịla onye nkwusa a na-emebeghị baptizim. Ugbu a, nna mama ya a na nne mama ya na-ekpekọ ekpere ọnụ kwa ụbọchị. Oleekwanụ maka Gabriel? Ọ na-emekwa nke ọma n’ọgbakọ. Ọ ghọọkwala onye nkwusa a na-emebeghị baptizim. Nna mama ya kwuru na ya chọrọ inyefe Jehova onwe ya ma mee baptizim.
“Ọ Bụ Chineke Zitere Gị”
Na Brazil, otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Jennifer na-ekesa traktị Ndị Nwụrụ Anwụ Hà Ga-adị Ndụ Ọzọ? Mgbe ọ na-ekesa traktị a, ọ kụrụ aka n’ụlọ otu nwaanyị na-eme ngwa ngwa ka ọ pụọ n’ihi na ọ chọrọ ịga olili ozu ezigbo enyi ya ya ma ọ̀ ga-achọ iwere ụfọdụ nye ndị ezinụlọ. Jennifer gwara ya na ya chọrọ inye ya traktị kwuru na anyị ga-ahụ ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ ọzọ. Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ traktị ahụ, o juru ya anya. Ma o mechara nara ya ya. Jennifer jụrụ enyi ya ahụ nwụrụ anwụ. Nwaanyị ahụ gwara Jennifer na ihe o kwuru dị mma, sị ya nyekwuo ya traktị itoolu.
Jennifer mechara gaghachi na nke nwaanyị ahụ. Ya agwa ya, sị: “M mechara ghọta n’ụbọchị mbụ ahụ ị bịara na nke m na ọ bụ Chineke zitere gị ka i zie m ozi ga-akasi m obi n’ihi na m chọsiri ya ike.” O nyere ndị mmadụ traktị itoolu ahụ Jennifer nyere ya. Mgbe onye ezinụlọ nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ na-ekwu okwu olili ozu ahụ, ọ gụpụtaara ndị niile bịaranụ ihe e dere na traktị ahụ. Ihe ọ gụpụtara tọrọ ha ụtọ, ha ekelee nwaanyị ahụ nyere ha traktị ahụ. Nwaanyị ahụ na Jennifer malitere ịmụ Baịbụl.
Izi Ozi Ọma n’Ụgbọala Ọhaneze
Ụmụnna atọ ndị na-eje ozi na Betel dị na Heiti ji ọmarịcha ụgbọala ọhaneze na-eme njem. Njem a were ha awa abụọ na ọkara. Mgbe ha na-eme njem a, ha ziri ndị ha na ha nọ n’ụgbọala ozi ọma, nye ha magazin iri ise na traktị iri atọ. Otu n’ime ụmụnna ndị a aha ya bụ Gurvitch gụpụtaara ndị njem ibe ha otu ihe e dere na Teta! anyị. Mgbe ọ na-agụpụtara ha ya, otu nwa okorobịa aha ya bụ Pépé nọ na-ege ihe nwanna ahụ na-agụpụta. O tinyere ọnụ ozugbo n’ihe a na-ekwu, kwuokwa ka a mụwara ya Baịbụl. Ọ dabara na o bi n’ókèala ọgbakọ Nwanna Gurvitch nọ na ya. Kemgbe Jenụwarị afọ 2014 e zichara Pépé ozi ọma, naanị ugboro ole na ole ka ọ na-agaghị ọmụmụ ihe na mgbakọ. Ọ na-agwa ndị ọzọ ihe ọ na-amụta. O nwere olileanya ịghọ onye nkwusa a na-emebeghị baptizim n’oge na-adịghị anya.
mailto:?body=Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015043%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu